नेपाली क्रिकेटको बाटो | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← नन्दिताले पारिन् यसराजलाई जालमा (भिडियो)
बन्दकर्ताले मोटरसाइकलको साँचो झिक्दा मोटरसाइकल नै गायव ! →
काठमाडौ, चैत्र २४ – एउटा लक्ष्य पूरा हुनु भनेको अर्को लक्ष्यको सुरुआत हो,’ नेपालले भदौमा मलेसियामा आईसीसी वल्र्ड क्रिकेट लिग डिभिजन-४ उपाधि जितेलगत्तै क्रिकेटर शरद भेषावकरले भनेका थिए । उनको भनाइ अहिले नेपाली क्रिकेटसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ । काठमाडौंमा बुधबार सकिएको एसीसी ट्वान्टी-ट्वान्टी कपमा नेपाल उपविजेता भयो ।
सेमिफाइनलमा पुग्दै नेपाल नोभेम्बरमा यूएईमा हुने आईसीसी ट्वान्टी-ट्वान्टी वल्र्डकप छनोटमा पुग्यो । सन् २०१४ मा बंगलादेशमा हुने छोटो संस्करणको वल्र्डकप खेल्ने बाटो खुला गर्‍यो, नेपालले । मलेसियामा डिभिजन-४ जित्दै नेपालले सन् २०१५ मा अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डले संयुक्तरूपमा आयोजना गर्ने वान-डे वल्र्डकपको बाटो खुला गरेको थियो । तर वल्र्डकप खेल्ने बाटो लामो र चुनौतीपूर्ण छन् । त्यसैले त नेपाली टिमका कप्तान पारस खड्का भन्ने गर्छन्, ‘अहिले धेरै उत्साहित हुनुहुँदैन । अझै धेरै गर्न बाँकी छ ।’ त्यसको मतलब हाम्रो एउटा लक्ष्य पूरा भयो, अब अन्य थुप्रै लक्ष्य बाँकी छन् ।
नेपालले अहिले दुवै वल्र्डकपको बाटो खुला गरेको छ । वल्र्डकपसम्म पुग्न नेपालले बाटोका धेरै काँडा पन्छाउनुपर्ने हुन्छ । यूएईमा हुने छनोटमा १६ टिमको सहभागिता रहनेछ । त्यो प्रतियोगिताको शीर्ष ६ मा अटाए नेपालले बंगलादेशमा बलिया टिमसँग खेल्न पाउनेछ । छनोटमा अफगानिस्तान, क्यानडा, आयरल्यान्ड, नामिबिया, नेदरल्यान्ड्स, स्कटल्यान्ड, यूएई, पपुवा न्युगिनी, नेपाल र हङकङ पुगिसकेका छन् । अब ६ टिमको टुंगो लाग्न बाँकी छ । नेपाली प्रशिक्षक पुबुदु दासानायके वान-डेमा भन्दा ट्वान्टी-ट्वान्टीमा वल्र्डकप खेल्ने नेपालको मौका प्रबल रहेको बताउँछन् । भन्छन्,’हाम्रो लक्ष्य दुवै वल्र्डकपमा खेल्ने हो । तर वान-डेमा थोरै टिमले मात्र खेल्न पाउँछन् । ट्वान्टी-ट्वान्टीमा १६ टिमलाई स्थान दिइएको छ ।’ टेस्ट खेल्ने १० राष्ट्र र ६ एसोसिएट टिमले वल्र्डकप खेल्न पाउनेछन् । ‘यसमा बढी टिमले मौका पाउने भएर पनि हाम्रा लागि सहज देखिएको हो,’ उनले भने ।
उनकै प्रशिक्षणमा नेपाल सन् २०११ मा वल्र्डकप छनोटमा पुगेको थियो । तर यूएईमा भएको सोह्र टिम सहभागी छनोटमा नेपाल शीर्ष ६ मा अटाउन सकेन । नेपाल सातौं भएको थियो । त्यसबेला पपुवा न्युगिनीसँग हार्नु टिमको दुर्भाग्य रहेको पुबुदु मान्छन् ।
यसै वर्ष मलेसियामा आईसीसी वल्र्ड क्रिकेट लिग डिभिजन-४ बाट डिभिजन-३ मा छनोट हुँदै नेपालले वान-डे वल्र्डकपको बाटो खुला गरेको हो । बर्मुडामा अपि्रल २८ देखि मे ५ सम्म ६ राष्ट्र सम्मिलित डिभिजन-३ हुँदैछ । त्यसको शीर्ष दुई स्थानमा रहे नेपाल डिभिजन-२ मा पुग्नेछ र वान-डे वल्र्डकपको छनोटमा खेल्न पाउनेछ । अब अघि बढ्नका लागि नेपाली क्रिकेटले तत्कालै के गर्नु पर्ला ? भन्ने प्रश्नको उत्तर अफगानिस्तानका प्रशिक्षक रइस मोहमदजैरको सुझाव काम लाग्छ । नेपालको प्रदर्शन’bout उनको प्रतिक्रिया थियो, ‘पहिलेको भन्दा नेपाली टिममा धेरै सुधार आएको छ । अहिले हरेक खेलाडी जित्न चाहन्छन् । वल्र्डकपमा पुग्नका लागि अझै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ । हामी वा हामीभन्दा बलिया टिमसँग अभ्यास गर्नुपर्छ ।’ अफगानी प्रशिक्षक मोहमदजैरको जस्तै पुबुदु र पारस बताउँछन् । भन्छन्, ‘पूर्ण तयारी भएमात्र राम्रो नतिजा आउन सक्छ ।’ खेलाडीहरूले त्यहीअनुसार मिहिनेत गरेको पारस बताउँछन् । भन्छन्,’हरेक खेलाडी अहिले आ-आफ्नो प्रदर्शनमा ध्यान दिन्छन् । टिमलाई माथिल्लो स्तरसम्म पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने सबैको सोच छ ।’ नेपाली क्रिकेट सही दिशामा अघि बढिरहेको पूर्वक्रिकेटर राजु बस्न्यात मान्छन् ।
‘यही गतिमा अघि बढ्ने हो भने हाम्रो वल्र्डकप खेल्ने सपना पूरा हुन्छ,’ उनले भने । देशमा बढ्दो क्रिकेट क्रेजलाई नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले ध्यान दिन सक्नुपर्छ । डिभिजन-३ को राम्रो तयारीमा क्यानले कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । क्यान महासचिव अशोकनाथ प्याकुर्‍यालले छोटो समय भए पनि डिभिजन-३ को तयारीका लागि भारत प्रशिक्षणमा लाने पहल भइरहेको बताए । उनले भने, ‘हामी वल्र्डकप पुग्ने हिसाबमा विगतदेखि नै तयारी गर्दै आइरहेका छौं ।’ प्याकुर्‍यालले नेपालको वान-डेमा भन्दा पनि ट्वान्टी-ट्वान्टी वल्र्डकप खेल्ने सम्भावना रहेको बताए । भन्छन्,’त्यसका लागि हामीले बलिया र राम्रो टिमसँग अभ्यास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पहल गरिरहेका छौं ।’